Inde: Fankalazana ny Raksha Bandhan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2010 20:58 GMT
Omaly , ny andron'ny 24 Aogositra , nankalaza ny Raksha Bandhan i Inde – fety izay hankalazana ny fifamatoran'ny mpianadahy .
Mamehy ny zava-dehibe amin'ity fotoan-dehibe feno hafaliana sy azo antenaina ity ny mpitoraka bilaogy Neha Kapur Grover ao amin'ny mumbaikar.com. Hoy izy :
Mankalaza ny fifandraisan'ny mpianadahy feno fitahiana ny fetin'ny Raksha-bandhan …Raksha-bandhan, ankalazaina isan-taona amin'ny andro diavolana amin'ny volana Shravana ny Raksha-bandhan, fantatra ihany koa amin'ny hoe Rakhi. Mamatotra kofehy masina nohatsaraina ireo anabavy, antsoina hoe ‘rakhi’ eo amin'ny hato-tanan'ny anadahiny izay manambara ny ‘ vonam-piarovana ’. Mivavaka ho an'ireo anadahiny ho salama tsara izy ireo ary manome toky koa ny anadahiny hiaro ny anabaviny. Tonga miaraka ireo fianakaviana, manao lanonana amin'ny lovia manokana, fanomezana,ary miara-paly .
Sary avy amin'i Flickr mpampiasa Yogesh Kumar Jaiswal, nahazo alalana avy amin'i CC By NC-SA.
Mandeha amin'ny twitter ny fihetseham-pon’ anabavy amin'ity fotoan-dehibe ity .
parishna – Mahafinaritra ery ny mamatotra #Rakhi ho an'ireo anadahiko rehetra sy ny mandany fotoana miaraka amin'izy ireo !
anikaforever – Nahazo rakhi tsara kely …….. tiako ny anadahiko !!!
Tsy voafetran'ny firahalahiana eo amin'ny rà / zanakalahin'ny mpirahalahy na mpirahavavy fotsiny ny fomba fanao amin'ny famatorana rakhi . Araka ny nohazavain'i Amrita Puri
tsy natao ho an'ny mpiray tampo iray rà ihany ity fifamatorana ity – afaka manangana zazalahy kely ny vavy kely iray hataony anadahy amin'ny alalan'ny famatorana Rakhi. Tsy manamafy ny fifamatoran'ny fitiavana fotsiny ihany ity fomba fanao ity, fa mampahafantatra kokoa ny fetran'ny fianakaviana ihany koa. Midika ny filàna fiainana ara-tsosialy milamina ny fisian'ny Rakhi mifatotra eo amin'ny hato-tanan'ireo namana akaiky na mpiray vodirindrina . Manampy amin'ny fanitarana ny fijerin'ny tsirairay hihoatra ny fefin'ny fianakaviana misy azy ho amin'ny tany manontolo ( vasudha) ho fianakaviana iray izany
Hatramin'ny ny nahafahana “nanangana ” ny lehilahy ho anadahy amin'ny alalan'ny famatorana rakhi eo aminy, matetika ireo tovovavy no mampiasa ity fotoana ity ho fanararaotra hilazana amin'ny tovolahy iray fa tsy mahataitra azy ranamana. Amin'izay fomba mazava kokoa izay, manakiana mikasika ity lafiny amin'ny lanonana sy ny tebiteby vokatr'izany ho an'ny fon'ireo tanora lahy ity ireo feo sasany .
Mafy ny andron'i iMagesh – .. Ary nitsoaka i yay .. Tsy nisy tovovavy namatotra rakhi aho:-P
aaroo4 – @iMagesh haha.. zary kilalao ny mijery ireo tovolahy mitsoaka rakhi any am-pianarana
bharat_bansal – Mahatsiaro ireo andro nianarana taloha raha zatra nampitahorina handeha hianatra iray andro aloha na aorian'ny Rakhi. Tezitra tamin'izay 😉
strangetimes87 – @nuanse …Manantena fa ny tovovavy tianao tsy hiantso anao hoe bhaiyya (anadahy ) 😉
Karthik_Siemens- …Misaotra an'Andriamanitra , tsy nisy namatotra rakhi aho roa taona izao tao amin'ny IIITB. Afaka tamin'ireo tovovavy niantso ahy hoe bhayya 😉
Luke674 -omaly no andron'ny Raksha bandhan….!! misaotra an’ andriamanitra ireo anabaviko irery ihany no namatotra rakhi tamiko ….
zeeontwi – tena tsy tiako mihitsy #rakshabandhan.. Tsy ho fantatrao mihitsy hoe tovovavy iza no ho avy hamatotra # rakhi aminao ..dia ahoana raha tianao izy ??
Maneho ny alahelony noho ny tsy fahafahany mankalaza ity fotoana ity ireo anabavy manana anadahy mipetraka lavitra azy ireo. Ohatra, miteny i Avni :
_Avni – tsy dia tsara ny miaina any amin'ireo firenena hafa …malahelo ny anadahiko aho ..10 taona izao no tsy namatorako rakhi taminy hatramin'ny androany
Sary avy amin'i Flickr user Vishy-Washy, nahazoan-dalana avy amin'ny CC By-NC-ND.
Na izany aza, milaza ireo hafa fa miaraka amin'ny fahatongavan'ny Haino aman-jery ara-tsosialy, tsy olana intsony ny miresaka foana amin'ireo anadahy monina sy miaina any lavitra any. Mety tsy ho afaka hamatotra rakhi amin'ny hato-tanan'ny anadahinao hita vatana ianao fa kosa afaka soa aman-tsara manolo izany ka mandefa karatra amin'ny aterineto na sarina rakhi ho azy aza. Maneho karazana fahafaha-manao vitsivitsy i Anish Sadanandan ao amin'ny watblog.com:
Amin'izao fotoana izao, namoaka [rindrambaiko] Facebook vaovao i Cadbury izay antsoina hoe Virtual Rakhi ahafahan'ireo mpiray tampo hifandefa fanomezana sy rakhis . Amin'ny alalan'ity fampiharana iray ity, tsy ireo sarina rakhis ihany fa na ireo fanomezana tsy azo tsapain-tanana aza izay anisan'izany ireo boatin-tsokola avy amin'ny Cadbury…Misy ihany koa ireo tranonkala hafa izay mamela hanao handefa fifampiarahabana amin'ny olon-tianao toy ny rakhi-greetings.com sy ny 123greetings.com. I 123greetings aza manome safidy anao handefa ireo karatra Raksha Bandhan mifanaraka .
Milaza mikasika ireo fomba amelan'ireo haino aman-jery sosialy handray anjara amin'ity fomba amam-panao nentim-paharazana ity ireo mpisersera .
TheHumerus – tena mety tsara mihitsy – nandefa karatra Rakhi ho ahy ny zanak'olona mpiray tampo amin'ny ray aman-dreniko sady maniry ny hirary soa indray ao amin'ny Skype.
Afaka nitafatafa mivantana niaraka tamin'ny anabaviny mikasika ny rakhi tamin'ny alalan'ny fakantsary an-tranonkala i NeilNMukesh .
Madhu_tweetme – @smanrokr tsy namatotra rakhi tena izy tamin'ny olona aho :(((((( fa nandefa karatra rakhi tsy azo tsapain-tanana amin'ny olona maro :))))
Mahaliana tokoa , milaza i compulsivewriter fa amin'ny maha anabavy zokiny azy, izy irery no nazoto hiantsoroka ireo andraikitra amin'nny fampijoroana ireo mpiray tampo aminy mbola tanora ary noho izany nahazo ny zo hamatotra ny rakhi ao an-tranony . Manoratra izy:
Izaho no zokiny aminay mirahavavy …Amin'ny mahazokiny indrindra ahy amin'ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreninay rehetra, avy amin'ny ray sy reny , mihevitra aho fa andraikitro ny mijoro ho an'ireo zanak'olo-mpiray tampo amin'ny ray aman-dreniko ary miady ny adin'izy ireo ho azy ireo. Noho izany,raha misy manjò azy any am-pianarany, izaho no mandamina izany . Raha misy ireo tovovavy manakorontana ny rahavaviko, tonga dia alehako any aminy ary darohiko. Ary dia nihevitra aho, hanolotra ‘raksha’ aho hilazana fa maninona ireo zanak'olo-mpiray tampo amin'ny ray aman-dreniko no tsy mamatotra rakhi amiko? Fa maninona no ny anadahy irery ihany no mahazo ny fanajana ? Nandany ny fomba fisainako ny reniko . Nanomboka tamin'io andro io , nifamatotra rakhi izaho sy ny rahavaviko .
Ka niova ary ve ny fomba fanaon'ny Raksha Bandhan nandritra izany fotoana izay ? Mbola misy dikany lehibe ve izy amin'izao vanim-potoana sy taona izao ? Eny amin'ny lafiny rehetra, jereo i compulsivewriter ary hoy izy mandahatra :
…Ankehitriny , ny tena zava-dehibe dia ny fifampitokisana izay apetraky ny rakhi. Mikasika ny fikarakarana ireo mpiray tampo aminao ny lanonana ankehitriny. Ary niova ihany koa ny toky. Vehivavy mahaleo tena sy marani-tsaina ny rahavaviko izay miaina amin'ny herin'ny tenany amin'ny firenena samihafa, amin'ny kolo-tsaina samihafa. Tsy mila ahy izy hiaro azy . Nefa afaka mianiana toy izao aho. Raha mila fampaherezana izy, eo anilany aho. Raha te hanaraby olona izy , eo anilany aho. Raha mila famonjena ara-bola izy, omeko azy ny karatra fisintonam-bolako. Raha mila torohevitra izy, hanao izay rehetra vitako aho ary hanoro azy ny lalana tsara . Raha mila fampaherezana izy, ho entiko ho azy ny mofomamy misy ny voanioko . Raha mila tairina izy, omeko ny daka avy aoriana izy. Raha mila fandrisihana izy, ho tanana hanosika azy aho. Ary amin'ny andro izay tsy misy zavatra mety hampihomehy azy intsony, ho zokivaviny adalabe aho ary hanao izay rehetra azoko atao mba hahita ireo fandaingana hiseho eo amin'ny takolany .
Ho ela velona any ny toky atao amin'ny rakhi/ raksha bandhan. Tsy ho tapaka mihitsy anie ny vona .